China Microspheres Glass Hollow ho an'ny famokarana fitrandrahana solika sy orinasa | olan
Microspheres vera malalaka ho an'ny fitrandrahana solika
Mikraosera fitaratra loaka, vita amin'ny Soda Lime Borosilicate Glass, dia faritra lava be lava, 10-250mikrona ny hatevin'ny rindrina, 1-2 microns ny hatevin'ny rindrina, feno rivotra na lasantsy tsy mahomby.
Vakana vita amin'ny vera vita amin'ny vera borosilicate, dia microparticle fitaratra mikraoba borosilika misy rindrina manify izay 10-250 microns ny hatevin'ny rindrina, 1-2 microns ny hatevin'ny rindrina, feno rivotra sy entona tsy azo osaina, ampiasain'ny be mpameno ho loko, fingotra, FPR, marbra, fitrandrahana solika sy gazy ary fitaovana hafa. Ny habakabaka tsy manam-paharoa an'ny microspheres vera lava, lanja maivana ary tahan'ny fidiranana menaka ambany, dia afaka mampihena be ny fanjifana singa hafa hampihena ny vidiny sy hampiakarana ny fanoherana ny hafanana. Ny fitambaran-tsiranoka soda-sokay-borosilicate miorina amin'ny simika misy vakana fitaratra poakaty dia manome fanoherana rano tena tsara hamoronana emulsion azo antoka kokoa. Izy ireo koa dia tsy mora may sy tsy mitambatra, noho izany dia tsy mandray resina izy ireo. Ary ny tsy fahaizan'izy ireo ambany dia manome microspheres vera tsy misy fitoviana amin'ny ankamaroan'ny resins, viscosity marin-toerana ary fiainana lava.
PLASTIKA: BMC, SMC, koronosy tsindrona, fivoahana, fantsona PVC, sarimihetsika, nylon, Polyethylene avo lenta, Polyethylene ambany, polypropylene ambany
CERAMICS: Refractory, tile, Firebricks, Simenitra Aluminium, Fitaovana fanamafisam-peo, Coatings.
SANO ROCK: fanamboarana lavadrano, fitehirizana ny pie menaka, hafanana ampiasaina indray ny fikajiana
OLANA: Surf board, baolina bowling, fitaovana Flotation, fitaovana Golf
Miaramila: Mitifitra, miaro amin'ny efijery, tsy mahazaka feo
SPACE: fonosana Aerospace, fitambarana Aerospace
SORATRA: Vatan'ny sambo, Fitaovana mitsingevana, marika famantarana
AUTOMOTIVE: Composite, Undercoating, faritra misy ny motera, pad frein, famolavolana trim, body fillers, Plastika, fitaovana fanamafisam-peo
CONSTRUCTION: Simenitra manokana, Mortars, Grouts, Stucco, fitaovana fanakonana, takelaka akustika.
Hatramin'ny nananganana ny Langfang Olan Glass Beads tamin'ny taona 2010, dia takatray ny maha-zava-dehibe ny fanomezana vokatra tsara kalitao sy ny serivisy tsara alohan'ny varotra sy aorian'ny fivarotana, dia manolotra serivisy feno avy amin'ny fampandrosoana ny vokatra izahay hanaraha-maso ny fampiasana fikojakojana, mifototra amin'ny tanjaka ara-teknika matanjaka, fampisehoana vokatra ambony, vidiny mirary ary serivisy tonga lafatra. Hanohy hivoatra izahay, hanome ireo vokatra sy serivisy avo lenta ary hampiroborobo ny fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifanay, ny fampandrosoana iraisana ary ny famoronana ho avy tsaratsara kokoa.
Previous: Fitotoana vakana fitaratra 0.4-0.8mm
Manaraka: Microspheres vera lava (OLH-D)
Mikraoba bitro misy vera
Beady Glass loaka
Bubble fitaratra loaka
Sehatra fitaratra loaka
Microspheres vera lava (OLH-D)
Microspheres vera lava (OLH-A)